Imithethonqubo ehlukene kanye namakhodi wemikhuba kudingeka ilandelwe uma kuthunyelwa izingulube. Ngokufingqa, inhloso yabo ukuvimbela ukusakazeka kwezifo nokunciphisa ukucindezeleka kwesilwane ngesikhathi sokuhamba.
Ukvinjwa Nokuphephiswa Kwezilwane
Ukuvimbela izimoto ezisuka ezifweni ezasakazekayo, kufanele zihlanzwe kahle futhi zihlweliswe nge-disinfected ngaphambi kokuba zibuyele kunoma iyiphi i-piggery. Ezindaweni lapho izivimbelo zesifo zikhona khona, izingulube ngeke zithunyelwe ngaphandle kwemvume evela ku-State Veterinary. Uma izingulube ezigulayo zihanjiswa, kufanele zihanjiswe ngokwehlukana noma zihlukaniswe nezingulube ezinempilo.
Ama-pig kufanele, ngokusemandleni onke, athuthelwe ngesikhathi sezingxenye ezipholile zosuku, kodwa ngokuvamile, angathandi ukuthuthwa ebusuku. Izilwane kufanele zivikeleke ekukhanyeni kwelanga eliqondile, kubanda kakhulu, kuphefumula emoyeni futhi kuphelelwe amandla. Ukudayiswa, kusuka embhedeni noma impahla eqinile, kufanele kusetshenziswe uma izilwane zizohanjiswa ngesikhathi sokushisa kosuku. Kungasiza futhi ukumanzisa izingulube uma kushisa kakhulu.
Amapulangwe kufanele abe non-slide futhi izinhlangothi kufanele zibe phezulu ngokwanele ukuvimbela izingulube ukuba zingangeni emotweni.
Ama-pig of the same size and age kufanele ahlanganiswe ndawonye, ​​ngezihlukaniso zisetshenziselwa ukwehlukanisa izigaba ezahlukene zezingulube noma ukuhlukanisa izinombolo ezinkulu zibe amaqembu amancane ukuze ugweme ukuchoboza ukulwa nokuhlukunyezwa.
Amapulangwe kanye nezingxenye lapho izilwane zigcinwa khona kufanele kube mkhulu ngokwanele ukuvumela zonke izilwane ukuba zilale ngesikhathi esifanayo, nebhekoni ngayinye nengulube encane yengulube edinga okungenani imitha engamakhulu ayisishiyagalolunye nesithupha nezingulube ezinkulu ezidinga ku-0.74 amamitha square ngamunye.
Ngenkathi izingulube zivame ukudlala ngesikhathi sokuhamba, kufanele zinikezwe ngamanzi zingakapheli amahora angu-18 emva kohambo lwazo lwaqala lapho zihamba ngamabanga amade.
Umhlahlandlela wokukhiqiza we-Porks Association of South Africa, i-Pigs for Profit, uxwayisa abalimi ukuba balayishe kuphela izimoto uma sebekulungele ukuhamba njengoba izingulube zilwa lapho zicasuliwe, ikakhulukazi lapho imoto ikhona. Ngakho-ke ulungele ukulungisa wonke amaphepha ngaphambi kokulayisha izingulube.
Ukunakekela kufanele kuthathwe ukulayisha izilwane ngokucindezeleka okuncane ngangokunokwenzeka. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa izisebenzi eziqeqeshwe ukulayisha izingulube, ngokusebenzisa ukuziphatha kwemvelo yengulube futhi usebenzise imigwaqo yokulayisha kanye namapulatifomu okuzovumela izingulube ukuba zihambe ngokukhululekile ezimotweni.pIzingulube, isibonelo, zishukumise kalula uma zishukunyiswa njengeqembu. Kulula futhi ukuqondisa ukunyakaza kwabo uma uhlala emgqeni wabo wombono.
I-pigs for Proft ibonisa ukuthi abalimi basebenzisa i-noose catching eduze komhlathi ophezulu wezingulube uma kudingeka bathuthe izinkukhu. Ungazami ukususa umuntu omdala ohlwanyelayo noma amathumba kuphela njengoba enzima kakhulu futhi enamandla kunomuntu.
Indawo yokulayisha kufanele ibe ngukuphakama nokuphakama okufanayo njengephansi yemoto lapho izingulube zizolayishwa khona, okungaba nzima uma izingulube ziqoqwa ngezimoto ezehlukene. Bangase baphakanyiswe ezithweni zokuthutha, kodwa lokhu kungaba nzima futhi kubangele ukulimala. Izilwane kungenzeka zingadonswa imilenze yazo noma ziphakanyiswe noma ziphathwe ikhanda, izindlebe noma imisila.
Abashayeli bezimoto kufanele babe nezilwane. Kumele bahambe ngendlela elula kakhulu ukuvimbela izilwane ukuba zingawa, ziqhubisane futhi zidale ukulimala. Izimoto kufanele zimiswe lapho kudingekile futhi uhlelo oluhlelwe ngaphambili lwe-contingency kufanele lusetshenziswe ngaphambi kokuhamba uma kwenzeka izimo eziphuthumayo noma ukuphazamiseka. Abashayeli kufanele baqeqeshelwe ukwazi ukuthi benzeni ngesikhathi esiphuthumayo futhi babe namafoni ukuthi axhumane nomuntu uma edinga usizo.